Ukuphinda uyile i-imeyile: Iimpawu ezi-6 ezifuna ukucinga kwakhona | Martech Zone
Lwesine, Okthobha 8, 2015 Lwesine, Okthobha 8, 2015 URichard Smullen
Kuxhomekeka ekubeni ubuza kubani, i-imeyile ibikho kangangesithuba seminyaka engama-30 ukuya kwengama-40. Ixabiso laso licacile, ngokusetyenziswa kwezicelo kuzo zombini izinto zentlalo kunye nezobugcisa. Okwabonakalayo, nangona kunjalo, yindlela iteknoloji ye-imeyile ephelelwe lixesha ngayo. Ngeendlela ezininzi, i-imeyile iphinda ifunyenwe ukuze ihlale ihambelana neemfuno ezikhulayo zabasebenzisi banamhlanje.
Kodwa uhlala ucinga ngento ngaphambi kokuba uvume ukuba ixesha lidlulile? Xa uqala ukujonga imigibe ye-imeyile kwaye uchonge iindawo zokuphucula, uqala ukuqonda ukuba iya kuba yintoni eyahlukileyo 'i-imeyile 2.0' ukuba ibiyakhiwe kwaye yasungulwa namhlanje. Zeziphi izinto ezinokubandakanywa okanye ziphuculwe? Kwaye kwakuza kushiyeka ntoni? Ngaba uyilo lwayo olutsha luya kuboleka kolunye usetyenziso?
Ukuba besinokuphinda sisebenzise i-imeyile namhlanje, nazi iziseko ezithandathu ezinokuthi zisebenze njengeqonga le-imeyile elitsha. Andazi ngawe, kodwa ukuba ndingasebenzisa le nkqubo, ndingonwaba kwaye ndisebenze ngakumbi ...
Azisekho iidilesi ze-imeyile
Iibhokisi zethu zebhokisi engenazinto zixinene ngokupheleleyo. Ngokwenyani, ngokweQela leRadicati, I-84% ye-imeyile efunyenwe namhlanje ngogaxekile. Kuba oku kulula kakhulu: iidilesi ze-imeyile zivulekile. Yonke into ayifunayo yidilesi ye-imeyile kunye 'ne-voila' -bakwibhokisi yakho engenayo. Kwi-imeyile 2.0, kuyakubakho inkqubo esekwe kwimvume enesazisi esinye. Kwaye oku kuchonga kuya kuhlala kuyimfihlo njengenombolo yeselfowuni.
Ibhokisi engenayo ihambile
Nje ukuba sifumane 'isazisi' kunye nemvume yendlela yabasebenzisi ngokuchanekileyo, singalahla i-inbox. Ewe, ibhokisi yemiyalezo engenayo. I-imeyile 2.0 inokulungiselela ngcono amashishini kunye nabathengi ukuba 'incoko' nganye okanye umyalezo ngamnye wentambo ugqithe 'ekubambeni lonke' uhlobo lwebhakethi, aka kwibhokisi engenayo. Umbhobho othe ngqo phakathi kweshishini kunye namalungu alo abaphulaphuli iya kuba luphuculo olwamkelwe kakuhle kakhulu.
Uhlobo oluvulekileyo lweedilesi ze-imeyile kunye nokugqabhuka kogaxekile kukwathetha ukuba siziqhelile ii-virus, imizamo yobuqhetseba kunye nokukhwabanisa. Ngaphandle kokunyaniseka, nantoni na kunokuba 'ibuyiselwe umva' ayivumelekanga. Ke, nge-imeyile i-2.0, singafuna ukukwazi ukuhlawula amatyala, sayine amaxwebhu ayimfihlo kwaye sabele ngaphezulu kwepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda. Oku kunokwenzeka kuphela ukuba umjelo okhuselekileyo, ofihliweyo ngokupheleleyo uvulwe phakathi komthumeli kunye nomamkeli ngaloo ndlela uqinisekisa ukungala.
Unxibelelwano lwangempela kunye noxanduva
Xa uthumela umyalezo we-imeyile, kwenzeka ntoni kuwo? Ngaba ilahliwe, ibanjwe sisihluzo sogaxekile, ifundwe, ayihoywa? Inyaniso yile; awazi. Nge-imeyile i-2.0, ukuphendula kunye nokwenza ingxelo kuya kuba phambili nakwiziko. Njengokusebenza kwemiyalezo, i-imeyile yethu yekamva iya kuba esekwe kubathunywa kwaye ikhuthaze ixesha lokwenyani, unxibelelwano ngqo. Ihlala ivuliwe kwaye ihlala isebenza ngokufanelekileyo.
Ukukhula okukhawulezileyo kweselfowuni kucebisa ukuba mhlawumbi lixesha leqonga eliyilelwe kuphela ukusetyenziswa gwenxa kwengqondo. Ubomi buhamba ngokukhawuleza okukhulu kunakwiminyaka engama-30 eyadlulayo kwaye, emva koko, ii-imeyile ezinde kunye nemizobo entle ye-HTML engasebenziyo. Abantu bakhetha ukunxibelelana besebenzisa amagama ambalwa kuphela, ngesiqhelo ngeqonga lengxoxo. Ke i-imeyile 2.0 kuya kufuneka iqinisekise unxibelelwano olungcono; mfutshane, ngexesha elifanelekileyo kwaye yenzelwe ukuba ifundwe kwiselfowuni nokuba umamkeli uphi na ehlabathini.
Ngelixa oku kunokubhekisa kakhulu kubomi bethu, oku kubhekiswa ngqo kwiifayile eziqhotyoshelwe kwi-imeyile ethunyelwe ngayo. Umndilili waseMelika uchitha malunga nemizuzu emithandathu ngosuku ekhangela izincamathiselo kunye neefayile. Oko kuguqulela kwiintsuku ezintathu zokulahleka kwemveliso ngonyaka. I-imeyile 2.0 ngokuqinisekileyo iya kuqonda ukuba zeziphi izinamathiselo esasizifumana kwaye sizilawule ngokufanelekileyo. Fayilisha le ilapho, uyihambise apha. Hlaba umkhosi ngentlawulo njl.
tags: emailiidilesi emaili-imeyileUyilo lwe-imeyileukuhamba kwe-imeyile
URichard Smullen yi-CEO ye Pypestream. Ngaphambili wayekhonza njengomseki-mbambano kunye ne-CEO yeGenesis Media LLC, isizukulwana esilandelayo kwimithombo yeendaba ezininzi, iqonga lokwazisa ngevidiyo yokwenene.
Uyijonga njani iMpumelelo yezeNtlalontle